lulu: ၁၈ x ၂ အလှူအမှတ်တရလေးများ
၁၈ x ၂ အလှူအမှတ်တရလေးများ
at 3:48 PM Labels: အထွေထွေ
၁၅- ၈ -၂၀၁၀ ရက်နေ့မှာ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူ၊ ဘုရားအနေကဇာတင်ပွဲတို့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နော်။
မောင်နှမများအားလုံး ဒီအလှူမှာ ပြုခဲ့တဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်အတွက် ထပ်တူထပ်မျှ ကြည်နူးပီတိ ခံစားနိုင်ရအောင်လို့မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
အလှူမှာ ချက်ခဲ့တဲ့ ဟင်းလျာများကို နောက်နေ့ကျ ချက်နည်းနဲ့တကွ တင်ပေးပါ့မယ်နော်။
Swant August 17, 2010 at 5:04 PM
Thardu Thardu Thardu par..
I wish you have the forever happiness in live!!
:P August 17, 2010 at 6:15 PM